हेलिकप्टर दुर्घटनामा सात जनाको निधन मध्येका घिमिरे को हुन त ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > हेलिकप्टर दुर्घटनामा सात जनाको निधन मध्येका घिमिरे को हुन त ?
नेपाली सेनाका ३६ वर्षीय जमदार हुन् अर्जुन घिमिरे।
कालीदल गणको दरबन्दीबाट पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सुरक्षाका लागि परिचालित थिए उनी। जमदार घिमिरे मन्त्री अधिकारीको सुरक्षा कमान्डमा गत भदौ १० गतेदेखि सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। रामेछाप स्थायी घर भएका घिमिरे काठमाडौंको कीर्तिपुरमा डेरागरी बस्दै आएका थिए। उनका १० वर्षीय छोरा र श्रीमती छन्।
मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै चर्चित व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा पनि हेलिकप्टरमा थिए। उनी निजी क्षेत्रको हवाई सेवा यति एयरलाइन्सका मालिक हुन्।
मन्त्री अधिकारीको सुरक्षा कमान्ड घिमिरेले नै सम्हाल्दै आएका थिए। प्राय: घिमिरे आफै मन्त्रीको सुरक्षामा खटिन्थे। जमदार घिमिरे १९ वर्षीयको उमेरमा नै सिपाहीबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका थिए। २०५८ जेठ महिनाबाट उनले सैनिक सेवा प्रवेश गरेका थिए। घिमिरे मेहनती र इमान्दार अफिसर भएको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
लकडाउनको बेला अचानक ११ मुस्लिम सहित अन्य ३ नेपाली यस्तो अवस्थामा फेला परे